I-Raspberry Pi OS ibuyekezwe ngeRasbperry Pi 4 Support | Kusuka kuLinux
IRaspberry Pi Foundation inenhlanhla muva nje. Okokuqala bamemezele ukufika kwebhodi elisha le-SBC Raspberry Pi 4 Model B futhi manje nokuvuselelwa kohlelo lwabo lokusebenza. I-Raspbian OS manje isisekela ibhodi elisha leRaspi 4 futhi nezinye izinto eziningi ezintsha. Manje isuselwe ku-Debian 10 "Buster" distro. Ngakho-ke inesisekelo esihle lapho konke okulungiselelwe ukusebenza kahle ngalawa mabhodi ashibhile.
I-Raspbian OS nayo inezinambuzane eziningi noma ukulungiswa kwamaphutha, ukuthuthuka okuningi nemisebenzi emisha yokwenza ikhompyutha yebhodi eyodwa ibe nkulu kakhulu. I-raspberry Pi 4 Model B. Ngaphezu kwalokho, ukuba ne-hardware entsha enamandla amakhulu, uhlelo olusebenzayo nomthwalo owufakayo, kuzohamba kakhulu. Ukwethulwa kwaziwa njenge I-Raspbian 2019-06-20, futhi isiyatholakala ukuthi ungayilanda futhi uzame ...
U-Eben Upton, isikhulu esiphezulu se-Raspberry Pi ubephethe ukumemezela lolu hlobo olusha. Khumbula ukuthi simangele ukukhishwa kwangaphambi kwesikhathi kweRaspi 4 lapho bekungalindelwe lutho kuze kube unyaka ka-2020. Kube yisimanga impela naphezu kwezitatimende ebezenziwe U-Eben Upton phambilini nokuthi bakhombisile ukuthi i-Raspberry Pi 4 ibingeke ifike kuze kube ngu-2020. Ngenhlanhla izinhlelo zibukeka zishintshe kungazelelwe ...
I-Raspbian OS 2019 ifaka phakathi I-kernel LTS Linux 4.19.50, isibuyekezo esikhulu se-kernel, kanye nokunye ukuthuthuka nokuvuselelwa kwamaphakeji amaningi afakiwe (iFlash Player 32.0.0.207, i-OpenJDK 11, i-Chromium 74.0.3729.157,…). Isishayeli semidwebo ye-FKMS OpenGL yedeskithophu, umqambi wewindi we-xcompngr, ukuthuthuka kokukhethwa kukho kwamavidiyo, ezinye izici kumamenyu wokumisa, itimu yedeskithophu entsha yePiXflat UI, i-plugin entsha yokukala ukushisa kwe-CPU, nayo isetshenzisiwe. ukwahlukanisa okusha kwe-boot ye-256MB, ukulungisa kabusha imvelo yedeskithophu ye-PIXEL, ukulungiswa kwe-WiFi, njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Kubuyekezwe i-Raspberry Pi OS ngosizo lweRasbperry Pi 4